टेलिकममा ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ लाई ल्याउने प्रपञ्च, स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार परिवर्तन हुन्छ कार्यविधि – Aarthik Samachar
टेलिकममा ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ लाई ल्याउने प्रपञ्च, स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार परिवर्तन हुन्छ कार्यविधि
By आर्थिक समाचार	 On Dec 15, 2021
गत साता नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि विज्ञापन खुलायो । विज्ञापनसँगै बाहिर आएको संशोधित कार्यविधिले टेलिकममा धेरै ठूलो तरंग ल्याएको छ । कार्यविधिमा उमेरहद र अनुभवलाई परिवर्तन गरेपछि टेलिकमभरि नयाँ शंकाको लहर छाएको छ ।
कार्यविधि आएसँगै सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका टेलिकमका १० औं तहका वरिष्ठ सम्भावित कर्मचारी तथा वायरलाइन सेवा निर्देशनालय प्रमुख अनन्तमान सिंह पाखा लाग्नुपर्यो । कार्यविधिमा ५८ वर्षको ठाउँमा ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने गरी संसोधन भएपछि ५७ वर्षीय सिंह प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि स्वतः अयोग्य भए ।
अब टेलिकमभित्र नयाँ कार्यविधिले तोकेअनुसार सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको कर्मचारी प्रमुख व्यवसायिक अधिकारी सीसीओ संगीता पहारी छिन् । मन्त्रालय तथा बालुवाटारसँग राम्रै राजनीतिक पहुँच भएको बुझिने पहारी अहिले टेलिकमभित्रबाट प्रबल उम्मेद्वारको रूपमा देखापरेकी छिन् । तर कार्यविधिभित्र अनुभवलाई पनि १५ वर्षबाट १२ वर्षमा घटाएपछि हाल टेलिकमभित्र बाहिरियालाई भित्र्याउने चेलखेल सुरु भएको टेलिकम स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघिको कार्यविधिमा वरिष्ठ अधिकृतमा पाँच वर्षसहित १५ वर्षको कार्यअनुभव हुने व्यवस्था थियो भने हाल व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षकोसहित १२ वर्षको कार्यअनुभव भएको व्यक्तिले समेत प्रवन्ध निर्देशकका लागि आवेदन दिनसक्ने गरी कार्यविधि परिवर्तन भएको छ ।
पहारीकै हकमा कार्यविधि परिवर्तन भएको भए टेलिकमभित्र उनीसँग २५ वर्षभन्दा लामो सेवाको अनुभव छ । अहिले यसरी १२ वर्षमा अनुभव घटाउँदा बाहिरियालाई भित्र्याउने चलखेल स्पष्ट रुपमा आंकलन गर्न सकिन्छ ।
टेलिकमभित्र सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेललाई ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको स्रोतले बतायो । विकल पौडेललाई भित्र्याउने बारे यसअघिदेखि टेलिकमभित्र सुसुप्तरुपमा चर्चा पनि चलिरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण खरिदमा ७० करोड रुपैयाँको भ्रष्टचार काण्डमा जोडिएका पौडेललाई नै टेलिकमभित्र भित्राउने गरी उमेर हद ४० बाट ३५ मा घटाएको र अनुभवलाई १२ वर्षमा घटाएको सुत्रहरु बताउँछन् ।
पुरानो कार्यविधिअनुसार प्रवन्ध निर्देशक पदका लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेका अनन्तमान सिंहको वरिष्ठताको आधारमा प्रवल सम्भावना थियो । प्रवन्ध निर्देशक पदकै आकंक्षा राखेर निर्देशनालय प्रमुख सिंहले स्तानहकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता पुरा गर्न २०१६ मा हिमालयन इन्स्टिच्यूट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी नयाँ बानेश्वरमा भर्ना भएका थिए ।
प्रवल उम्मेद्वारलाई हटाउन यसपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि परिवर्तन गरेर कतै नभएको व्यवस्था राख्यो । ५८ वर्षको उमेरहदलाई ५६ वर्षमा सीमित गर्यो जुन कतै प्रचलनमा छैन ।
‘जब मंसिर १२ गते मेरो हातमा स्नातहकोत्तर तहको सर्टिफिकेट आयो तब म स्वतः योग्य भए, अब कार्यविधिमा कतै चलाउने ठाउँ नै नदेखेपछि मन्त्रालयले उमेरहदबाटै लगाम लगाइदियो,’ अनन्त मान सिंह भन्छन् । प्रवल उम्मेद्वारलाई हटाएपछि टेलिकममा कसलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउने भन्ने मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ ।
टेलिकमका सुत्रहरुका अनुसार यसपालीको प्रवन्ध निर्देशक पदमा टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले समेत आकांक्षा देखाएका छन् । टेलिकममा १० औं तहबाट छिरेर एमडी बनेका आचार्यको प्रवन्ध निर्देशक र उप प्रवन्ध निर्देशक गरी १४ वर्षको कार्य अनुभव छ ।
बारम्बार किन परिवर्तन हुन्छ टेलिकमको कार्यविधि ?
२०७० सालसम्म टेलिकममा वरिष्ठताको आधारमा उपप्रवन्ध निर्देशक, स्वतः प्रवन्ध निर्देशकमा बढुवा हुने व्यवस्था थियो । तर संस्थानलाई बलियो बनाउन प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम मान्छे ल्याउन उद्देश्यले २०७१ साल असोज १० गते टेलिकम बोर्ड, व्यवस्थापन, युनियन र मन्त्रालयका तत्कालिन् सचिव सुनिलबाबु मल्लबीच प्रतिस्पर्धाको आधारमा नै प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ती गर्ने कार्यविधि बनाउने सम्झौता भयो । तर उक्त सम्झौता अहिले आएर टेलिकमकै भविष्यका लागि ठूलो दूर्भाग्य सावित भएको छ ।
अहिले कार्यविधि आफू अनुकूल तथा नजिकका मान्छेलाई प्रवन्ध निर्देशकमा भर्ती गराएर व्यक्तिगत लाभ लिने ठूलो अस्त्र बनेको छ ।
जब २०७२ मा कार्यविधि पहिलोपटक परिवर्तन भयो तब प्रतिस्पर्धात्मक प्रावधान ल्याएर शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गर्ने काम भयो । जसबाट कामिनी राजभण्डारी प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भइन् । टेलिकमका अर्का अब्बल कर्मचारी सुनिल पोखरेललाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राखियो ।
दोस्रोपटक २०७२ मा डिल्लीराम अधिकारीका लागि पनि यसैगरी कार्यविधि परिवर्तन गरियो । उनको समयमा अनुभवको कुनै व्यवस्था नै नगरी प्रवन्ध निर्देशक पदबाट अवकाश भएका कर्मचारीलाई पनि पुनः टेलिकममा फर्किएर आउने व्यवस्था थप भयो ।
अहिले २०७८ सालमा पुन उमेरहद घटाएर अनुभव घटाएर अनन्त मानलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राख्ने खेल मन्त्रालयले खेलेको छ ।
यसरी तीनपटक विज्ञापन गर्दा तीन पटक नै कार्यविधि परिवर्तन गर्नु भनेको नीतिमा अस्थिरता ल्याउनु, नीतिगत भ्रष्टचार गर्नु हो । यसले टेलिकमलाई राम्रो भन्दा पनि हाम्रो नेतृत्व ल्याउने खेल भइरहेको टेलिकम स्रोत बताउँछ ।
अर्यालको भूमिकामाथि प्रश्न
निजामतीको क्षेत्रमा उच्चतम् छवि बनाएका हालका सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रका कूलमान पनि भन्ने गरिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उनको आगमनले ठूलै आशाको लहर ल्याएको छ ।
अर्थको सहसचिवको रुपमा २०६८ देखि २०७२ सम्म टेलिकमको बोर्ड सदस्य रहिसकेका अर्याल हाल टेलिकमको बोर्डमा अध्यक्षको रुपमा आइसकेपछि टेलिकमका सुधारको आशा पलाएको थियो ।
व्यवस्थापकीय र रणनीतिक कमजोरीका कारण धराशायी बन्दै गइरहेको टेलिकमलाई माथि लग्न ठूलो आड दिने सञ्चार जगतको हाल उनीमाथि अपेक्षा छ । तर, टेलिकमलाई हाँक्ने नेतृत्वमै चयनमै यसरी चलखेल हुन थालेपछि अहिले सचिव अर्यालको भूमिकामाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
नीतिमा स्थिरता ल्याएर यति अनुभव र क्षमता भएको मान्छे टेलिकममा लड्न पाउँछ भनेर निश्चित हुन पर्ने हो । तर, मान्छेको अनुकूलता, तजबिजीअनुसार टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त र सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि सधै किन परिवर्तन हुन्छ ? यसले आगामी दिनमा टेलिकमलाई कुन बाटोमा लाग्छ ? बारम्बार कसको लागि किन कार्यविधि परिवर्तन हुन्छ ? सिंगो राज्य कस्को प्रभावमा पर्छ ? एउटै कार्यविधिलाई ३ वटा क्याबिनेटले तीन पटकसम्म किन चलाउँछ ?यसरी कसैलाई योग्य र अयोग्य हुने गरी कार्यविधिमै परिवर्तन गर्दा कर्मचारीमाथि अन्याय भएको छ ।
‘उमेरहद लगाएर, योग्यता परिवर्तन गरेर किन हटाउनु,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘सिफारिस समितिको संयोजक त सचिव नै त हुन् । जसले आवेदन दिए पनि सिफारिस गरेर पठाउने उनकै संयजकत्वमा बन्ने ३ सदस्यको समितिले हो । ‘फिल्ट्रेट’ नै गर्ने हो भने माथि अझै दुई तह बाँकी नै थिए त तर प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिइ यसरी कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर बाहिर्याउनु त अन्यायपूर्ण छ ।’